THAZINRANANT: 8/2/09 - 8/9/09
ဒီဟာသအပိုင်းအစလေးတွေဟာ ညီငယ်ခိုင်မြတ်စိုး ကျနော့ဆီကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်
ရယ်သောသူသည်အသက်ရှည်၏ဆိုသလို ကျနော်တို့ ရဲ့ ဘ၀အမောတွေကြားထဲမာတစ်
ခါတလေ ရယ်မောစရာလေးတွေ တွေ့ ပြီး အားရပါးရ ရယ်မောလိုက်ရယင် စိတ်လက်ပေါ့
ပါးပြီး လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေတောင် ပျောက်ကွယ်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွ သလို
ဒီလိုပါပဲ ကျနော်တို့ နေ့ စဉ်ကြုံတွေ့ ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေထဲမှာလည်း ဟာသနှောပြီးပြော
တတ်တဲ့လူတွေဆိုယင်ကျနော်တို့ ကမသိမသာ ပိုမိုခင်မင်တတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါ
တွေကလူ တွေရဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝကို က ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာတွေကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောကို
ရနံ့အနေနင့် အချိန်ကုန်ခံတင်ပေးရကျိုးနပ်ပြီလို့ ခံယူပါတယ်။
“ဟဲလို မီးသတ်ဌာနကပါလား ခင်ဗျာ”
“မိတ်ဆွေ ခင်ဗျား မှားနေပြီ ဒါမီးသတ်ရုံးဗျ စိုက်ပျိုးရေးဌာနမဟုတ်ဘူး”
“ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်ခင်ဗျ၊ အခုကျွန်တော့်အ်ိမ်ဘေးမှာမီးလောင်နေပါတယ်။ခင်ဗျားတို့
မီးလာသတ်ရင်ကျွန်တော့်စိုက်ခင်းကအပင်တွေကို နင်းမိမှာစိုးလို့ ပါ"
“မောင်ရေ ကျွန်မရင်ဘတ်က ရင်ထိုးလေး ခါးပိုက်နှိုက်သွားပြီ ဒုက္ခပါပဲ”
“မင်းနှယ့်ကွာ လက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ မင်းရင်ဘတ်လာနှိုက်တာ မင်းမသိဘူးလား”
“ကျွန်မက မောင့်လက်မှတ်လို့ ကြည့်နေလိုက်တာ"
“ဟေ့ သူငယ် မင်းကျောင်းသားလား”“ဟင့်အင်း ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် တက်နေပြီ”
“အော် အော် ကျောင်းသားဘ၀ကကျော်လို့ ကျောင်းသူနားရောက်သွားပြီကိုး”
“နေပါစေ သားရယ်၊ သူတို့က လက်ထပ်တော့မှာပဲ”
“ဒါဆို သားတို့ဖေဖေရော အိမ်ဖော်ကောင်မလေးကို လက်ထပ်တော့မှာတဲ့လားဟင်”
“မင်းဘေးမှာ ငါထိုင်ပြီး စကားပြောနေခဲ့တာ တစ်နာရီမကတော့ဘူး ခုထက်ထိမင်းဆီက
မင်မှုအထ်ိမ်းအမှတ်နဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်တော့ ပြောစမ်းပါ”
“ရှင်ထိုင်နေတဲ့ ကုလားထိုင်က စောစောကမှ ဆေးသုတ်ထားတာရှင့်”
*သေဖို့တောင် မကြံသေးဘူး ဟန်ရေးကပြင်ပြီ*
နာတာရှည် ရောဂါဝေဒနာနဲ့ မသက်မသာ ခံစားနေရတဲ့ လင်ယောကျာင်္းကို မယားဖြစ်သူ
“မောင် အားမငယ်နဲ့နော် ကျွန်မရှင့်ကို ပြုစုလာခဲ့တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမကြာခင်ေ
“ရောဂါက မသက်သာပါဘူး မိန်းမရယ်”
“စောစောက မီးဖိုချောင်က ကြက်သားဟင်းနံ့ရတယ်ကွာ အဲဒါနဲနဲလောက် စားချင်လို့”
“အို အဲဒါ ဟိုလူ့ဖို့တော့်”
“ရှင့်သားခု ဘာလုပ်နေလဲ ကျွန်မသားကတော့ မန်နေဂျာဖြစ်နေပြီ”
“ဟုတ်လား ကျွန်မသားကလဲ ကုန်တိုက်မှာ အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်နေပါပြီပြဿနာတစ်ခုခုရှိ
တာနဲ့ သူ့ကိုခေါ်မေးရတာ။ သူသွားဖြေရှင်းပြမှဖြစ်တာ”
“အိပ်ရာပြောင်းအိပ်တဲ့ လစာလို့ သဘောထားလေ”
“မင်းအိမ်မှာ အိပ်မယ့်အစား ဒီမှာလာအိပ်ရတာ ဒါတွေက မြေတူးစက်ကြီးတွေထားတဲ့ဂို
“ရှေ့ခန်းမှာ စာရေးမဘယ်လောက်ခန့်ထားတာလဲ ”
“အင်း ဆယ်ယောက်ဆိုတော့ ကျုပ်အခန်းထဲမှာ နေရာပေးဖို့ဆံ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ဒီတော့လ
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အပျိုကြီတစ်ဦးညည်းညည်းညူ
“လောကမှာ ယောကျာင်္းအတော်များများက လူလိမ်လူညာတွေချည်းပဲ”
“တစ်ချိန်က ငါ့ကိုချစ်လှပါတယ် ကြိုက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောကျာင်္းတွေ အများကြီးပဲ”
“ငါ့ကို ယူမယ့်သူကျတော့ တစ်ယောက်မှ မရှိလို့”
Posted by သဇင်ရနံ့at 10:57 No comments:
ရခိုင်သမိုင်းထဲက ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတို့ နှင့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များဆိုလျှင်
ဆောက်အအုံ၊ပိရမစ်၊ ကျောက်စာ၊ ဘုရားပုထိုး၊စေတီ၊ဒင်္ဂါးများ၊လူ့အရိုးစုများ၊ဒါးလှံကျော
က်ဆူး လက်နက်များ၊ စာပေအက္ခရာများ၊ယဉ်ကျေးမှူရိုးရာအ၀တ်အစားများစသည်တို့သ
ပညာရှင်များကဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးစရာ မလိုတော့ဘဲ သိရှိကြပြီးဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌါနတို့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိနေရာသမိုင်းအချက်အလက်မျာ
ယင်းမှာ ရခိုင်လူမျိုးနွယ်စုများမဟုတ်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ------------------------------ကျွန်တော်ပြောနေသည်မှာမနုကဗေဒသမိုင်းပညာရှင်များအခန်း၊သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသန
ကြောင့် သဲသဲမဲမဲ လိမ်နေကြရသနည်းဆိုသောအဖြေကို ရှာကြည့်သည်။ ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်များမဟုတ်သောနိုင်ငံရေးသုတေသီများ၊ မျိုးဆက်သစ်ရခိုင်နိုင်ငံရေး
သမားတို့၏ အဆိုအရ သူတို့မှာ လျှို့ဝှက်အစီအစဉ် ရှိကြသည်၊လူမျိုးနွယ်စုအဖြစ်သာရရှိ
ာက်လန့်ခြင်းမှာ သဘာဝကျသည်၊သို့ပေမင့် ယင်းဟောပြျောမှုမျိုးကိုမပြူလုပ်နိုင်ရန်ခြိမ်း
ခြောက် နေသောသတင်းကိုလည်း ကြားနေရသည်။
ပးရေးမှာ အထူးအရေးကြီးသည်ဟု ထပ်လောင်းပြောဆိုကြသည်။
ပါးစပ်ရာဇ၀င်လျှေက်ပြောနေမှူတို့နှင့် သမိုင်းလိမ်လို့မရမှန်းသိရှိ သွားလျှင်သူတို့၏ထွက်
လားဟု မေးမြန်းသင့်သည်။ယင်းလူမျိုးတို့ကသာလက်သင့်ခံပြီး မိသားစုလို ညီရင်းအကို
တခုတော့ရှိသည်၊ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ မော်ကွန်း( အမျိုးသီလ၊ နှစ်ဌါနကို၊ပြည့်ဝမဏ္တိုင်၊စော
ခိုင်အောင်ကျော် (စစ်တွေ ) စာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာ နယူးယောက်။အမေရိကနိုင်ငံ
Posted by သဇင်ရနံ့at 18:38 No comments:
Japan actress missing after drug arrest of her husband
TOKYO – Japanese actress Noriko Sakai and her 10-year-old son have been
missing since her husband was arrested earlier this week for alleged drug p-
ossession, police said Thursday.
The actress was hugely popular in Asia, especially China, Hong Kong and T-
aiwan, during the 1990s because of her songs and TV dramas.
Sakai's mother-in-law asked Tokyo Metropolitan Police to search for the 38-
year-old actress and her son Tuesday,a day after Sakai's husband,Yuichi Ta-
kaso, 41, was arrested,apolice spokesman said.
He declined to be named, citing department policy, and also refused to give
details about the husband's case.
Kyodo News agency reported that police stopped Takaso while he was wal-
king in downtown Tokyo and found drugs when they searched him.
Sakai's disappearance has beenatop news item in Japan.
Masahisa Aizawa, president of Sakai's management agency, Sun Music, said
at news conference Tuesday that Sakai wasavery responsible person and u-
rged her not to go through the difficult time by herself.
Police said Sakai's mobile phone signal was last detected late Tuesday in Ya-
manashi,about 60 miles (100 kilometers) west of Tokyo,according to Kyodo.
Officials from the Metropolitan and Yamanashi police declined to confirm the
Kouzou Ishimoto, an official for Sun Music,said it was cooperating with polic-
e to find the actress and her son.
"We are extremely worried.We hope to find her and her son as soon as poss-
ible," Ishimoto said.
Source:AP news agency.
Posted by သဇင်ရနံ့at 18:02 No comments:
လွန်ခဲ့တဲ့လက မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံထဲကို တရားမ၀င်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုနှင့်အလုပ်ကြ
သူတို့ နှစ်ဦးဟာ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန်နှင့်မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်း
ဆောင်ကင်ဂျုံအီလ်တို့ တွေ့ ဆုံပြီးနောက်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။အခုဆိုယင်သူတို့ နှစ်
ဦးစလုံးကို သမ္မတဟောင်းက သူလေယာဉ်နှင့်အတူ အမေရိကန်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါ
ဒါပေမယ့်လေ့လာသူတွေကတော့ ဘီလ်ကလင်တန်ဟာ နှစ်နိုင်ငံ နျူကလီးယားပြသနာေ
တွမှာ လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး မြောက်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင်ကို မက်လုံးပေးခဲ့ပုံရပြီး ဒီကိစ္စ
နှင့်ပတ်သက်ပြီး သူ့ အပေါ်မှာ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေဖြစ်စေတယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
၀၆.၀၈.၀၉ နေ့ ထုတ် Bergen Tidende သတင်းစာကိုကိုးကားပါသည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 12:51 No comments:
Bill Clinton on N Korea mission
Former US President Bill Clinton has arrived in North Korea onasurprise visi
t, apparently to discuss the fate of two jailed US reporters.
He is the highest- profile American to visit since his own secretary of state ,
Madeleine Albright, went there in 2000.
No official reason for his trip has been given,but analysts say he will try to fr-
ee Laura Ling and Euna Lee, who were recently jailed for 12 years.
He may also try to ease the deadlock over the North's nuclear ambitions.The
last visit to North Korea byaformer American president -Jimmy Carter in
1994 - led to an important step forward in nuclear negotiations during an ot-
herwise tense period.
Tensions are also high now. In addition to the reporters' detention,North Ko-
rea has recently conductedastring of nuclear and missile tests in defiance o-
f repeated calls from the UN Security Council.
Mr Clinton landed in Pyongyang in an unmarked jet and was greeted at the
airport by North Korean officials, including chief nuclear negotiator Kim Kye
Gwan and Yang Hyong Sop, vice president of parliament.
Bill Clinton will reportedly try to secure the release of the two US reporters
As he stepped down from the plane,a little girl came forward to present him
withabouquet of flowers.
No information was given before the visit,and neither the US nor North Korea
have released an itinerary.
An American official travelling to Africa with US Secretary of State Hillary Cl-
inton - Bill Clinton's wife - said there would be no comment "while the miss-
ion is in progress". But, he added, "our interest here is the successful compl-
etion of the mission and the safe return of the journalists".
South Korea's Yonhap news agency quotedasource as saying: "As soon as
[Bill Clinton] arrives, he will be entering negotiations with the North for the
release of the female journalists."
There is speculation Mr Clinton might see leader Kim Jong-il,whom analysts
say is eager to improve relations with Washington as he prepares to name a
Mr Kim is thought to have sufferedastrokeayear ago,and also has chronic
diabetes and heart disease. Analysts say his third son is already beinglined
up to take over power one day.
Laura Ling and Euna Lee were found guilty of entering North Korea illegally
across the Chinese border in March, and sentenced to 12 years' hard labour.
They were arrested by North Korean guards while filmingavideo about refu-
gees for California-based internet broadcaster Current TV.
According to North Korea's state news agency KCNA,the two reporters have
admitted entering the country illegally.
The journalists were arrested while working on the China-N Korea border B-
ut the women's families have always claimed that Lee, 36,and Ling, 32 ,had
no intention of crossing into North Korea.
They fear the two reporters may become political pawns in negotiations be-
tween Washington and Pyongyang,amid growing tensions over North Korea's
Last month Mrs Clinton requested an amnesty for the women asking that th-
ey be allowed to return home.
This is not the first timeasenior US statesman has gone to North Korea to
negotiate for the release of American citizens.
In 1994, then-congressman Bill Richardson - now governor of New Mexico -
helped negotiate the release of Bobby Hall, one of two pilots ofaUS army
helicopter shot down after straying into North Korea.
Two years later he negotiated the release of Evan Hunziker,who was detai-
ned on suspicion of spying after swimming the Yalu river border.
The last former US president to visit Pyongyang was Jimmy Carter,who visi-
ted Kim Jong-il's late father Kim Il-sung in 1994 under Mr Clinton's preside-
That visit is credited with helping push throughabreakthrough accordafew
04.08.09 BBC news
Posted by သဇင်ရနံ့at 10:28 No comments:
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကိုယ်စလှယ်အဖွဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ
၀န်ကြီးဌာနတွဲဖက်အတွင်းဝန်Commodore(Retd) Khurshed Alamခေါင်းဆောင်သော
ရေနယ်နိမိတ်ကျွမ်းကျင်သူအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန်ဇူလိုင်၂၉ ရက်မှသြဂုတ်လ၁
အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှုးဗိုလ်မှုးချုပ်မျိုးမြင့်သန်း ခေါင်းဆောင်သောမြန်မာကိုယ်စလှယ်အဖွဲ့ နှ
lamခေါင်းဆောင်သောဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုယ်စလှယ်အဖွဲ့ တို့ သည်နှစ်နိုင်ငံပင်လယ်ရေနယ်
နိမိတ်ကိစ္စများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုယ်စလှယ်အဖွဲ့ အားဇူလိုင်၃၀ ရက်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုယ်စလှယ်အဖွဲ့ သည်ယနေ့ တွင်ရန်ကုန်မြို့ မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့်ပြန်လ
၀၂.၀၈.၀၉ နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ
Posted by သဇင်ရနံ့at 15:01 No comments:
Jarle Tverli ဟာနော်ဝေနိုင်ငံ Samnanger မြို့ ကဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဂျူလိုင်လကကုလ
သမဂ္ဂရဲ့ လူသားချင်းဆိုင်ရာ အကူအညီအစီအစဉ်နှင့်အတူမြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်ခဲ့သူ
ါ်ဒေသမှာ ရွာတစ်ရွာစီကနေအနည်းဆုံးလူဦးရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ
တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သူ့ ရဲ့ မြန်မာပြည်တစ်နှစ်တာအတွေ့ အကြုံကို နော်ဝေနိုင်ငံBergen
မြို့ ထုတ်Bergen Tidendeသတင်းစာမှအယ်ဒီတာ Borghild Berge ကတွေ့ ဆုံမေးမြန်း
တကယ်တော့ သူရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ဟာ သုံးလ သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ၃လကနေ
တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အယင်တုန်းကဘားမားလို့ လူသိများတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနေအထ
ကျနော့ရဲ့ မြန်မာမိတ်ဆွေတွေဟာ ကျနော့ကို မြန်မာပြည်မှာထပ်ပြီးနေချင်အောင်လုပ်နိုင်
ခဲ့ကြတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။သူတို့ ဟာအင်မတန်ခင်မင်စရာကောင်းပြီးပူးပေါင်းဆောင်
န်ာဟ ၃လကနေတစ်နှစ်အထိနေဖြစ်သွားတာလို့ ဖြည်စွက်ပြောကြားပါတယ်။မြန်မာပြည်
မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ထိခဲ့တဲ့နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့်လူ့ အသက်ပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ ကျော်
Jarle ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs(OCHA)နှင့်အတူနာ
ဂစ်ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ မြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ OCHA ဟာတ
ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီတွေကိုပေးဖို့ လှို့ ဆော်
နာဂစ်မုန်တိုင်း စတိုက်တဲ့အစောပိုင်းလတွေမှာ နိုင်ငံခြားသားအားလုံးနီးပါးလောက်ဗီစာမ
ရခဲ့ကြလို့ နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ တွေအတွက်အတော်လေးအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့
ကြရပါတယ်။အခုချိန်ထိ မုန်းတိုင်းထိတဲ့ဒေသတွေမှာ တည်ဆောက်ရေးလုပ်စရာတွေအ
ကောင်းမွန်ခိုင်ခန့် အောင်ဆောက်လုပ်ဖို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဖို့ အင်မတန်ခက်
ခဲပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲရတာဟာ မြန်မာ စစ်အစိုးရ အပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ လူကြိုက်မများ
မုန်းတိုင်းဟာအထူးသဖြင့် ဧရာဝတီဖြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသတွေကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီး အဲဒီဒေသေ
တွမှာ Jarle ဟာနေရာဒေသအတော်များများကိုရွေ့ ပြောင်းနေထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီးဒီဒေသ ဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလည်းလာခွင့်မရှိပဲ အတော်ကြာပိတ်ပင်ခဲတဲ့
သမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ဟာမုန်တိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မာခိုင်ခိုင်မာမာမကိုင်ထား
နိုင်ခဲ့ကြလို့ မုန်တိုင်းနောက်ပါသွားခဲ့ကြရတာပါ။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အဆိုအရ သေဆုံးသူ
အရေအတွက်ဟာ ၁၄၀၀၀၀ ကျော်ဆိုပေမယ့် သူ့ အထင်တော့ဒီမကအများကြီးပိုများနိုင်
တဲ့အနေအထားထက် ငွေကြေးအကူအညီတွေပိုမိုတောင်းခံတတ်ကြပေမယ့် မြန်မာပြည်
မှာ လုံလောက်တဲ့ထိမ်းချုပ်မှုတွေ စာရင်းဇယားအချက်အလက်တွေရှိခဲ့ပုံမရဘူးလို့ သူက
Jarle ဟာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရဲ့ ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာတွေအားလုံးကိုတတ်နိုင်သလောက်
အအကူအညီပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူတို့ နှင့်အတူ အခြားနိုင်ငံတကာအကူအညီပေး
ရေး အဖွဲ့ ပေါင်း ၅၀ ကျော်တို့ လဲ ဒီဒေသမှာလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
ပြင်ပနှင့်ဆက်သွယ်ရတာဟာ အကန့် အသတ်ရှိပြီးအစိုးရကပဲ အကုန်ချုပ်ကိုင်ထားပါတ
ပါတယ်။ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးဖို့ တော့ခက်ခဲနေပါအုံးမယ်။
အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရတာဟာ စိတ်ကြေနပ်စရာကောင်းပါတယ်
လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။
-အာရှ၏အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်၊လူဦးရေ ၄၈ သန်းကျော်ရှိ
-ရန်ကုန်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်၊လူဦးရေ ၄ သန်းကျော်ရှိ
-တရားဝင် မြို့ တော်ဟာ နေပြည်တော်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်၏အလယ်တွင်ရှိ
-စစ်အုပ်ချုပ်ေ၇းကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ခဲ့
၀၂.၀၈.၀၉ နေ့ ထုတ် Bergen Tidende သတင်းစာမှ
Posted by သဇင်ရနံ့at 10:20 No comments:
ရခိုင်သမိုင်းထဲက ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတို့ နှင့် သမိုင...
Japan actress missing after drug arrest of her hus...